राेचक संसार Archives - krishipost.com
जलवायु परिवर्तन: गर्मीले कीराको प्रजनन क्षमता ‘आधा घट्छ’
काठमाडौं । गर्मीका कारण कीराहरूको शुक्राणु घट्ने र तिनमा बाँझोपन हुन सक्ने एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ। वैज्ञानिकहरूले प्रयोगशालामा खपटे कीराको एउटा जाति घुनलाई उष्णलहर दिँदा तिनका भालेको प्रजनन क्षमतामा उल्लेख्य ह्रास भएको पाइयो। त्यस्तो प्रभाव खपटे कीराका सन्तानमा पनि सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। थप...
यो झार चिन्नुभएको छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार कमाई !
काठमाडौं । जागर र पौरखमा सिप घुलाउन सके सुन बनाउन सकिन्छ । आफ्नै माटोलाई पगालेर मोती बनाउँन सकिन्छ । नेपाल सम्भावना नै सम्भावना भएको देश हो ।यसैले हामी आज हाम्रा भीर पाखाबाट कसरी आम्दानी गर्न सक्छौ भन्ने जानकारी दिँदैछौ । अर्गानिक वल्र्ड प्रा।लीले काभ्रेका...
यो हो संसारकै महँगो कीरा, जसले तपाईलाई रातारात बनाउन सक्छ करोडपति !
एजेन्सी । संसारमा धेरै प्रकारका जीवहरू पाइन्छ, जसमध्ये धेरै दुर्लभ छन् । आज हामी तपाईलाई एउटा यस्तो जीवको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ, जसको बारेमा थाहा पाउँदा तपाई अचम्म पर्नुहुनेछ । धेरै मानिसहरू जनावरहरू पाल्न मन पराउँछन् जसको लागि तिनीहरू धेरै पैसा खर्च गर्छन् ।...
काठमाडौँ । नेपालीको भान्सा धान्ने सब्जी, स्कुस । घर–आँगनमा सजिलै फल्ने । धेरै फल्ने । स’स्तो, स्वादिलो, सुपाच्य र स्वस्थ्यकर । स्कुस वहुउपयोगी तर’कारी । स्कुसको मु’न्टा, फल र जरा सबै स्वाद फेर्दै खान सकिन्छ । त्यससँगै स्कुस धेरै मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले यसले...
काठमाडौं । नेपालमा बट्टाई पालन निकै फस्टाएको छ। बट्टाईको अन्डा र मासुलाई पौष्टिक खाद्य पदार्थ मानिन्छ। यसको मासुभन्दा पनि अन्डा निकै स्वा’स्थ्यबर्धक हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। बट्टाईको अन्डा स्वास्थ्यका हिसाबले बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई फाइदाजनक खु’राक मानिन्छ। नेपालमा पाँच प्र’जातिका बट्टाई पाइन्छन्। तीमध्ये ‘कमन क्वेल’ बट्टाई...
६१ लाख रुपैयाँमा ३२ वटा मुर्रा भैँसी किन्दै सरकार ?
काठमाडौ । सरकारले झण्डै ६१ लाख रुपैयाँमा ३२ वटा मुर्रा भैँसी किन्ने भएको छ । राष्ट्रिय भैँसी अनुसन्धान कार्यक्रम तरहरा सुनसरीले ६० लाख ९९ हजार रुपैयाँमा २ वटा वलसहित ३२ वटा भैँसी खरिद गर्ने भएको हो । कार्यक्रमले ३२ वटा मुर्रा भैँसी किन्न लागि...
केजीको १० हजार पर्ने च्याउ ग्यानोडर्मा यसरी फलाउनुहोस् !
काठमाडौं । विश्व बजारमा मात्र नभएर नेपाली बजारमा समेत माग हुने गरेको रातो च्याउको उत्पादन अझै न्युन छ । तर, यसको बजार मुल्य भने प्रतिकेजी रु. १० हजार रहेको छ । औषधिय गुणले भरिपूर्ण रातो च्याउको व्यावसायिक खेतीको श्रेय च्याउविद् डा. केशरी लक्ष्मी मानन्धरलाई...
सबैको चासोको बिषय जिउँदो गाइकै पेटमा प्वाल पर्दा के हुन्छ ?